4 Ma nke ahụ wutere Jona nke ukwuu,+ iwe ya wee dị ọkụ. 2 O wee kpekuo Jehova ekpere, sị: “Ewoo, Jehova, ọ́ bụghị ihe a ka m nọ na-eche, mgbe m nọ n’ala m? Ọ bụ ya mere m ji gbagawa Tashish;+ n’ihi na m maara na ị bụ Chineke nke na-eme amara, onye na-eme ebere,+ onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, onye obiọma* ya dị ukwuu,+ onye na-agbanwekwa obi ya wee ghara iweta ọdachi.+ 3 Ugbu a, Jehova, biko, wepụ mkpụrụ obi m,+ n’ihi na ọ kaara m mma ịnwụ anwụ karịa na m dị ndụ.”+ 4 Jehova wee jụọ ya, sị: “Iwe+ dị ọkụ ị na-ewe ò ziri ezi?” 5 Jona wee pụọ n’obodo ahụ wee nọdụ ala n’ebe ọwụwa anyanwụ nke obodo ahụ; o wee wuoro onwe ya ụlọ ndò+ n’ebe ahụ, ka o wee nọrọ ọdụ na ndò ya ruo mgbe ọ ga-ahụ ihe ga-eme obodo ahụ.+ 6 Jehova Chineke wee mee ka osisi ogiri ụgba pulite, ka o wee kpuchie Jona, iji bụụrụ isi ya ndò, ka o wee belata ahụhụ ya.+ Jona wee malite ịṅụrị ọṅụ nke ukwuu n’ihi osisi ogiri ụgba ahụ. 7 Ma ezi Chineke mere ka ọtị+ pụta mgbe chi echi ya bọwara, ka o wee tagbuo osisi ogiri ụgba ahụ; o wee kpọnwụọ.+ 8 O wee ruo na ozugbo anwụ wara, Chineke mekwara ka ifufe+ dị ọkụ nke si n’ebe ọwụwa anyanwụ fee, anwụ wee na-acha Jona n’isi nke ukwuu, o wee malite ịtụbọ;+ o wee na-arịọ ka ya nwụọ, ọ nọkwa na-ekwu ọtụtụ ugboro, sị: Ọ kaara m mma ịnwụ anwụ karịa na m dị ndụ.”+ 9 Chineke wee jụọ Jona, sị: “Iwe dị ọkụ+ ị na-ewe n’ihi osisi ogiri ụgba a ò ziri ezi?” O wee sị: “Iwe dị ọkụ m na-ewe nke na m chọrọ ịnwụ ziri ezi.” 10 Ma Jehova sịrị: “Gị onwe gị meteere osisi ogiri ụgba ebere, bụ́ nke ị na-adọgbughị onwe gị n’ọrụ maka ya ma ọ bụ mee ka o too, nke tokwara naanị n’otu abalị ma laa n’iyi dị ka naanị ihe toro n’otu abalị. 11 Ọ̀ bụ na mụ onwe m ekwesịghị imere Ninive bụ́ obodo ukwu ebere,+ bụ́ ebe e nwere ihe karịrị otu narị puku mmadụ na puku iri abụọ, bụ́ ndị na-amaghị ma ọlị ihe dị iche n’aka nri ha na aka ekpe ha, n’agụnyeghị ọtụtụ anụ ụlọ?”+